‘स्टिङ अप्रेसन’: संवैधानिक निकाय नै घूस खुवाउने - Netizen Nepal
मुख्य समचार वर्गीकृत समसामयिक हाम्रो नेपाल
August 1, 2020 August 1, 2020 नेटिजन नेपाल	0 Comments
काठमाडौँ, १६ साउन। काठमाडौंको गोकर्णेश्वर–३ का ढुंगा–गिटी व्यवसायी सुजन पौडेलले महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) श्यामकुमार राईले ‘कार्यालयमा टीभी किन्न आफूसँग घूस मागेको’ भनेर २०७५ असोज दोस्रो साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) मा उजुरी गरे ।
३० असार २०७७ मा सेवाग्राहीसँग रु.१३ हजार घूस लिंदै गर्दा पक्राउ परेका सप्तरी मालपोत कार्यालयका नायव सुब्बा कृष्णबल्लभ ठाकुर । ठाकुरलाई अख्तियारको इटहरी कार्यालयले ‘रंगेहात’ पक्राउ गरेको हो ।तस्वीर: श्रवणकुमार देव
मकवानपुर जिल्लाको साविक हेटौंडा नगरपालिका–२ का प्रह्लादप्रसाद धिताल जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा सहायक वन अधिकृत थिए । तालिमका लागि काठमाडौंस्थित वन विभागमा रहेका बेला ११ असार २०७१ मा उनलाई काभ्रेपलान्चोककै व्यवसायी जगतलाल तामाङले फोन गरेर भेट्न खोजे । वन विभागमै भेट भयो । भेट्नेवित्तिकै तामाङले नमस्कार गर्दै ‘कोक पिउन जाउँ’ भने । धितालले कोकको सट्टा स्प्राइट मागे ।
क्यान्टिनमा स्प्राइट पिउँदै गर्दा तामाङले रु.२० हजारको पोको थमाए । पूर्वयोजना बमोजिम नजिकैबाट अवलोकन गरिरहेका अख्तियारका कर्मचारीले धिताललाई पक्राउ गरे । ‘रु.२० हजार घूससहित रङ्गेहात पक्राउ गरिएको’ मुचुल्का तयार भयो । कथा रोचक छ । जगतलाल तामाङले आफ्नै गाउँका कृष्णप्रसाद दाहालसँग ५७ वटा गोब्रे सल्लाका रूख किनेका थिए ।
वन कार्यालयले रूख कटान इजाजत पत्र प्रत्येक वर्षको १५ जेठ भन्दा पछि दिंदैनथ्यो । १४ जेठ २०७१ मा सहायक वन अधिकृत धितालले रूख धनी दाहाललाई कटान इजाजत पत्र दिएका थिए, तर उक्त पत्रमा कार्यालयको छाप र चलानी नम्बर उल्लेख गर्न छुटेछ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले रजतप्रसाद भर्सेस सीबीआई मुद्दामा भनेको छ— ‘अपराधीलाई समात्ने उद्देश्य भए पनि स्टिङ अप्रेसनले केही नैतिक प्रश्नहरू उठाउँछ । आरोपी, जो अन्यथा निर्दोष छ– उसलाई पूर्ण गोपनीयताको ग्यारेण्टी गर्दै अपराध गर्न उक्साइन्छ, यस्तो अवस्थामा सो व्यक्तिलाई कसरी दोषी ठहर्याउन सकिन्छ ? जबकि उसले सामान्य अवस्थामा अपराध नगर्न सक्थ्यो ।’
तर, घूस लिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नबाट अख्तियारलाई रोक्ने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार कसरी कम होला त ? “त्यो काम गर्ने जिम्मेवारी कानूनले जुन निकायलाई दिएको छ, उसैले गर्नुपर्छ । कर्मचारीले घूस मागे कार्यालय प्रमुख, विभाग, मन्त्रालय अनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि उजुरी गर्न सकिन्छ” डा. आचार्य भन्छन्, “उपचारका बाटा धेरै छन्, तर कसैलाई ‘ट्रयाप’ मा पारेर अनुसन्धान गर्ने परिपाटी सभ्य समाजलाई सुहाउँदैन र त्यो विधिको शासनको विरुद्धमा पनि हुन्छ ।” खोज पत्रकारिता केन्द्र
← कोदो: पहिलेको कु-अन्न, अहिलेको सु- अन्न
हेर्नुहोस, साप्ताहिक राशिफल (साउन १८ देखि २४ गतेसम्म) →